मकै संसारमै सबैभन्दा धेरै खपत हुने अन्नमध्ये पर्दछ । यो खान मिठो हुनुका साथै पर्याप्त मात्रामा पोषक तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ । मकै पिठो, चिनी, रक्सीका रुपमा पनि प्रयोग हुने गर्दछ । यसलाई उसिनेर, पोलेर...
तपाईं रूनु हुन्छ ? यस्ता छन फाइदा
रुनु जतिसुकै पिडा भएपनि रुन सकिरहेका हुँदैनौ हामी । तर त्यसो गर्नु हानिकारक हुने बताइन्छ । यदि रुन मन छ या पिडा भएको छ भने मजाले रुनुहोस्, जसले स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ । तपाईँलाई दिक्क लागेका...
जण्डिस छ ? पानी अमला खानुहोस्
गाँउ घरमा त सायद धेरैले सानो छदा खाएकै हुनुपर्छ पानी अमला । स्कुल जाँदा होस या घाँस दाउरा गर्दा । प्राय धेरैले यो खाएका छन् । तर यसको फाईदा भने कमैलाई थाहाँ छ ।...
गर्मी यसरी स्वस्थ्य राख्न सकिन्छ छाला, यी खानेकुरा नियमित खानुहोस !
गर्मी मौसम सुरु भएको छ । धेरैलाई अब आफ्नो त्वचालाई कसरी सुरक्षीत गर्ने भन्ने चिन्ता हुने गर्छ । हुन त चिसो मौसम होस् या गर्मी, छालाको सफाइ अनिवार्य छ। तर गर्मी मौसममा छाला फुस्रो...
दाँत पहेलाे छ ? यस्ता छन् सेताे बनाउँने घरेलु उपाय
कागती दाँतको पहेँलोपनबाट छुटकारा पाउन कागती प्रमुख अस्त्र हो । त्यसका लागि कागतीको रसमा नुन मिसाएर दाँतमा लगाउन सकिन्छ । र, केही समयपछि कुल्ला गर्न सकिन्छ । दुई हप्तासम्म लगातार यसो गर्दा दाँतको पहेँलोपन सफा भएर जाने गर्छ । खाने...
ज्योतिष शास्त्र अनुसार यी राशी भएकाहरूकाे प्रेम र बैवाहिक सम्बन्ध कहिल्यै टुट्दैन !
राशी अनुसार व्यक्तिको स्वभाव फरक फरक हुन्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रेम सम्बन्धममा पनि राशी अनुसार फरक हुने कुरा बताइएको छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई कुन कुन राशी भएका व्यक्तिहरुको प्रेम सम्बन्ध बलियो...
दक्षिण एशियामा पाकिस्तानी र भुटानी पछि नेपाली खुसी !
चैत्र ७ काठमाण्डौं । दक्षिण एशियामा नेपाल तेस्रो नम्बरको खुसी भएको मुलुकमा परेको छ । दक्षिण एशियामा पहिलोमा पाकिस्तान (विश्वव्यापी रुपमा ६७) नम्बरमा छ भने दोस्रोमा भुटान (विश्वव्यापी रुपमा ९५) नम्बरमा परेको छ भने...
मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ जिरा पानी पिउनुहोस्
विश्व श्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुशार पछिल्लो समय जीवन शैलीमा आएको परिवर्तन खास गरी शारीरीक श्रम कम गर्ने र विभिन्न जंक परिकारहरु खाने गर्नाले धेरै मानिसहरु मोटाउने समस्या बढेको छ । मोटा मान्छेहरुको ६०...
नुन बढी खाने गर्नुभएकाे छ ? यस्ता खतरनाक राेग लाग्न सक्छ
-नुनको मात्रा बढी भएमा शरीरमा पानीको कमी हुने, निश्चित अंगमा पानी जम्मा हुने, शरीर सुन्निनेजस्ता समस्या हुन्छ । -त्यस्तै, शरीरमा नुनको मात्रा बढी भएमा मिर्गौलामा पत्थरी, उच्च रक्तचाप, मुटुमा समस्या, पेटमा अल्सर, धमनीमा क्षतिलगायत गम्भीर...
मुख गन्हाउछ ? यसाे गर्नुहाेस्
– सुकमेललाई मुख गन्हाउने औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । खाना खाइसकेपछि एउटा सुकमेल मुखमा च्याप्ने बानीले मुख गन्हाउने समस्याबाट बिस्तारै मुक्ति पाउन सकिन्छ । – खानापछि धनियाँको पात चपाउने गर्नुपर्छ । धनियाँले सासलाई फ्रेस...